Anisan’ny lafo indrindra ny vidin’ny herinaratra eto Diego. Tsy eken’ny foko izany koa manao velirano aminareo aho fa ahenantsika 20% ny vidin’ny jiro ao anatin’ny telo taona.
Ho asiantsika "centrale solaire" mamokatra herinaratra anisan’ny lehibe indrindra eto Antsiranana ary "éoliennes" ihany koa mba hiverenan'ny fahazavana eto Madagasikara.
Ho filoham-pirenena hitondra fandrosoana ho anareo aho indrindra ho anareo eto Antsiranana.
Fitia mifamaly ny antsika, ary ho porofontsika izany amin'ny 19 desambra ho avy izao.